Ogaden News Agency (ONA) – Dilal ka dhacay gudaha Ogadeniya oo Ciidamada Woyanuhu geysteen
Dilal ka dhacay gudaha Ogadeniya oo Ciidamada Woyanuhu geysteen
Posted by ONA Admin	/ September 28, 2012
Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ayaa xalaaleystay dilka shacabka somalida Ogadeniya iyada oo cidna dib isuweydiin sababta loo dilay waxaana marar badan dhacda qofki su’aal ka keena dilka shacabka in isna la khaarajiyo ama muuqisa dib loo waayo nolol iyo cidhib meel uu ku danbeyay.
Degmada Danood ee Gobolka Doollo waxay Askarta Woyanuhu si naxariis daran ugu dileen Allaah ha u naxariiste Sheekh Jaamac Cabdi Goosay taarikhdu markay aheyd 21/09/2012.
Allaah ha u naxariiste Godo Cumar Sugulle ayaa askarta Woyaanuhu ku dileen Deegaanka lagu magacaabo Nuurada oo ka tirsan Degmada Sagag. taariikhdu markay aheyd 20/09/2012.
Alllaah ha u naxariiste Sareeye Cabdullaahi ayay askarta Woyaanuhu isna ku dileen Deegaanka Galaalshe taariikhdu markay aheyd 16/09/2012.
gumeysiga Ethiopia ayaa caado u yeeshay gumaadka shacabka aan waxba galabsan midaas oo awal hore qarsooneyd oo beesha caalamku arki karin xaqiiqda jirta. markii ONA soo waranto dad badan oo la laayay waxaa adkeyd in lasoo bandhigo sawirada dadka la dilay ama wareysiyo laga soo qaado qoyska dadkaas cabsi ay qabaan awgeed madama oo qofkii ka hadla la dilayo qudhiisa.
Hadaba waxaan si buuxda uga dharagnay muuqalada xaqiiqda ah ee SVT tv-ga sweden lagusoo saaray dadka la gumaday iyo qoysaska dadkaas markay hadlaan iyana la dilayo ama la xidhayo oo lala tagayo.
Odeyaasha ree Ogadeniya ayaa iyagu hadiyo jeer ka cawda dilka iyo xasuuqa lagu hayo shacabka, iyada oo markay hadlaana la dilo ama la xidho sida uu sheegay odey kamid ah Shacabka ogadeniya oo u sheegay u adeegayasha gumeysiga isaga oo og in la dili hadana ku dhiiraday inuu yiraahdo
“Haddii uu Ciidanka Liyuu Poliska ee taraarega ahi uu arlada yimid. dad leeday ayaa jira meel uu ku dhaqanyahayna aan lagaranayn oo magaaladayadan laga qabtay oo Odeyaal ah. Hadii dadka dilka laga joojiyo oo odeyaasho uubateyso oo la dhowro dadka kuwa dibada jooga ayaa iska soo dhaadhacaya”
Waxaa sidaas ka hor sheegay odey kamid ah shacabka Ogadeniya. Odeygaas oo markii uu xaqa sheegay isna la kaxaystay sidii dadka uu u dacwonayay oo kale oo isna illaa hada la ogeyn in la dilay iyo innu noolyahay wali. Filimka hadalka odeygan ayaa ku jiray Cajaladi laga daawaday SVT TV Sweden.
Waxaa beesha caalamka iyo shacabka Ogadeniya meelkasta oo ay joogaan laga raba in laga jawaabo muuqaladan lasoo saaray. Haayada Xuquql Insaanka ayaa qaatay caddeymahan cusub oo la rajeynaya in ay wax badan kusoo kordhin doonto xaqiiq raadinta Ogadeniya ee beesha caalamku raadinaysay. Sidoo kale jaaliyadaha Ogadeniya ayaa ku howlan sidii ay kaalintooda uga ciyaari lahaayen iyada oo mudaharado iyo dhageysiyo badan ka smaeyn doona Baarlamaanka wadamao badan oo Europe iyo North America kamid ah.